शून्य ग्यास शुल्क सहितको ब्लकचेन - Shiv's Era
शून्य ग्यास शुल्क सहितको ब्लकचेन
– फ्यान्टम र पोल्का डट्स ग्यास शुल्कमा बढेको छ
– Bitgert सँग शून्य ग्यास शुल्क छ, यसलाई आजको सबैभन्दा धेरै खोजिने परियोजनाहरू मध्ये एक बनाउँदै
– बिटगर्ट ब्लकचेन ग्याँस लागत $0.000000001 हो
Fantom (FTM) र पोल्का डट (DOT) बीचको भिन्नता के छ?
Fantom (FTM) र Polkadot (DOT) केही क्रिप्टोकरेन्सीहरू हुन् जसले बढ्दो ग्यास शुल्कसँग संघर्ष गरिरहेको छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लेनदेन गर्न धेरै महँगो बनाउँदैछ। Bitgert चेनसँग शून्य ग्यास शुल्क छ, यसलाई आज बजारमा सबैभन्दा खोजिने परियोजनाहरू मध्ये एक बनाउँदै।
पहिलो ग्यासरहित ब्लकचेन लेनदेन लागत $0.000000001
Bitgert blockchain ग्यास लागत $0.000000001 हो, क्रिप्टोकरेन्सी उद्योगमा सबैभन्दा कम ग्यास। 100k TPS को साथ Fantom (FTM) र Polkadot (DOT) नेटवर्कहरू भन्दा ग्यासरहित चेन छिटो छ। विकासकर्ताहरूले पनि सोलाना भन्दा छिटो, छिटो चेनको मजा लिइरहेका छन्।
के Centcex ले आफ्नै ब्लकचेन निर्माण गर्नेछ?
Centcex परियोजना Binance स्मार्ट चेन मा छ, $2 मा सस्तो चेन मध्ये एक। तर यो अझै पनि Bitgert को तुलनामा महँगो मानिन्छ, जसले लगभग शून्य ग्यास शुल्क प्रस्ताव गरिरहेको छ। अफवाहहरू छन् कि परियोजनाले आफ्नै ब्लकचेन बनाउन सक्छ, जुन BCS भन्दा सस्तो र छिटो हुन सक्छ।
खेल समाप्त: विकासकर्ता प्रोत्साहनहरूमा बढ्दो ग्यास मूल्यहरूको प्रभाव
फन्टम (FTM) चेन ग्यास विगत केही हप्ताहरूमा बढिरहेको छ, र यसको मतलब लेनदेनहरू महँगो हुँदै गइरहेको छ। यो Fantom नेटवर्कमा विकासकर्ताहरूका लागि नराम्रो खबर हो जसले अब उही लेनदेनको लागि बढी तिर्नुपर्छ। यसको अर्थ वित्तीय दबाब बढ्दै जान्छ, जसले प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताहरूलाई सस्तो विकल्पहरू खोज्न नेतृत्व गर्न सक्छ।
यो तल्लो ग्यास शुल्क र छिटो गतिको साथ ब्लकचेन हो
पोल्का डट (DOT) अर्को ब्लकचेन हो जसले यसको ग्यासमा वृद्धिको अनुभव गरिरहेको छ। बढ्दो ग्यासले कारोवारको लागत बढ्दै गएकाले विकासकर्तालाई निकै असुविधा भइरहेको छ । कम ग्यास शुल्क र सबैभन्दा छिटो गति भएको बिटगर्ट चेनको आगमनले मामिलाहरूलाई जटिल बनाउन सक्छ।